Maxaa la sameeyaa haddii lammaanaha ay kala fog yihiin | Bezzia
Maxaa la sameeyaa haddii labada qof ay kala fog yihiin
Maria Jose Roldan | 06/04/2021 22:13 | Xiriirka
Ogaanshaha in lamaanaha uu fogyahay waa mid ka mid ah cabsida kuwa xiriirka la leh. Kala fogeynta marba marka ka dambeysa waxay keenaysaa in arrimuhu aysan la mid ahayn bilowgii xiriirka, taasoo keenta cabsi ah inuu dhammaadkeedii yahay.
Marka tan la eego, qofka ku lug leh ma garanayo wuxuu sameeyo, in la isku dayo in wax walba sidii hore lagu celiyo. Xaaladaha noocaas ah, waxaa lagama maarmaan ah in la helo sababta ama sababta labada dhinac ee lamaanaha midkood uu uga fogaaday kan kale.
1 Dammaanadda labada lamaane
2 Waxyaabaha keena kala fogaanshaha lamaanaha dhexdooda
3 Sida loo dhaqmo haddii lammaanaha kaa fog yahay
Dammaanadda labada lamaane
Labada lamaane si ay u xoojiyaan una koraan, waxaa muhiim ah in la abuuro isku xirnaan. Waa inay jirtaa wada noolaansho gaar ah markay tahay bixinta iyo helitaanka. Haddii taasi aysan dhicin, aad ayey macquul u tahay in isku xirnaanta ay si tartiib tartiib ah u daciifto isla markaana kala fogaanshaha mid ka mid ah dhinacyada ayaa bilaabmaya Si curaarta loo sii xoojiyo, waa inay jirtaa qanacsanaanta labada dhinac heer shucuur iyo shucuur. Haddii aysan taasi dhicin, waa caadi in mid ka mid ah xubnahu uu fogaado xiriirkiina uu ku dhammaado inuu fashilmo.
Waxyaabaha keena kala fogaanshaha lamaanaha dhexdooda
Waxaa jira sababo dhowr ah oo uu qofku ugu kala fogaan karo lammaanihiisa:
Qofka waxaa soo gaadhay luminta qof muhiim ah wuxuuna ku dhex jiraa murugo. Marka tan la eego, waa wax iska caadi ah in dabeecadda qofka ay si weyn isu beddesho waxayna ku muujin karaan xoogaa kala fogaansho lamaanaha. Haddii tani dhacdo, waa lagama maarmaan in la siiyo dhammaan jacaylka suurtogalka ah.
Cadaadiska laga helay shaqada, qoyska ama qofka aad isqabtaan, Waxay sababi kartaa xoogaa fogaanta xiriirka. Haddii tani dhacdo, waxaa muhiim ah in lala hadlo lamaanaha lana dhiso dhammaan tilmaamaha suurtagalka ah ee looga gudbi karo cadaadiska noocaas ah.
Dagaalku saacadaha oo dhan wuu daalaa qofka iyo dooro inaad ku fogaato xiriirka. Muranka iyo dagaalku uma fiicna lammaanaha sidaa darteed waxaa lagugula talinayaa inaad ka hadasho waxyaabaha una soo jeediso xalka.
La ildaran gaalnimo Waa mid kale oo ka mid ah sababaha ugu badan ee qofku ku kala fogaado lammaanihiisa.
Sida loo dhaqmo haddii lammaanaha kaa fog yahay
Marka la ogaado waxa keena kala fogaanshaha noocan oo kale ah, waxaa muhiim ah in xal la helo si xiriirku uusan u jabin:
Waa muhiim in la ag fariisto lammaanaha iyo weydiiso qaab deggan sababta keentay kala fogayntaas.
U naxariisashada lammaanahaaga waxay kaa caawinaysaa inaad ogaato sida aad dareemayso iyo awoodaan inuu saxo dhibaatada.
Waa inaadan ku dhicin kibir oo aad la fogaato lammaanahaaga. Haddii tani dhacdo, arrimuhu aad bay uga sii xumaan doonaan oo aad ayey u adkaan doontaa in dib loo helo xiriiriyaha.
Marka la soo koobo, haddii lammaanahaagu kaa fog yahay, waxaa muhiim ah in la ogaado sababta kalliftay xaaladdan iyo isku day inaad wax walba ku soo celiso sidii ay markii hore ahayd Xiriirka lamaanaha waa mid muhiim ah waana in taxaddar la muujiyaa sida ugu macquulsan si looga hortago lamaanaha laftiisa inuu kala tago.
Wadada buuxda ee maqaalka: Bezzia » Cilmu-nafsiga iyo lamaanaha » Xiriirka » Maxaa la sameeyaa haddii labada qof ay kala fog yihiin
5 magaalo oo kuyaala wadanka Faransiiska oo aad jeclaan lahayd inaad ku noolaato
5 shay oo ay tahay inaad sameyso maalin kasta si aad u caafimaad qabtid